ဘဏ္ဍာရေး | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဘယ်အရာကိုပေါင်နှံဆပ်ဖို့ငွေမရှိသောဆိုရငျကော ဖော်ပြချက်, အကြံပြုချက်များနှင့်ဖြေရှင်းပြဿနာများ
အပေါ် Posted 04.09.2018
ကံမကောင်းစွာပဲ, အပေါင်ခံထုတ်ယူသောသူသည်လူအများစုသူတို့နေမကောင်း, အလုပ်ဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်အချို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေများသို့ရနိုငျသောအချက်ကိုစဉ်းစားကြဘူး။ စည်းကမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် ...
မိုးရာသီတွင်ငွေရေးကြေးရေးအရမလိုအပ်ဘဲနေထိုင်ခြင်းသည်အလွန်လျင်မြန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းခက်ခဲသောအခြေအနေများရှိသော်ငြားလည်းသင့်မိသားစု၏ဘတ်ဂျက်ကိုငွေစုဆောင်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
မော်တော်ဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်လိုင်စင်များအတွက်ယစ်မျိုးခွန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အကောက်ခွန်နယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်၍ ကုန်ပစ္စည်းများရွေ့လျားခြင်းအပါအဝင်အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်သူတို့၏နှုတ်ယူခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
Sberbank, "စီးပွားရေး" မိုဘိုင်းဘဏ်အထုပ်: ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Sberbank ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအများဆုံးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်၊ သုံးစွဲသူများသည် Sberbank အဖွဲ့အစည်းရှိဘဏ်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ပေးသော "Mobile Bank" ဝန်ဆောင်မှုကိုမိမိတို့နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ "Mobile Bank" (အကောက်ခွန် "Economical" ...
အရှုံးမရှိဘဲအလွယ်တကူမြန်မြန် Yandex မှ Qiwi သို့ငွေမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း။
နှစ်များတစ်လျှောက်အင်တာနက်သည်ဖျော်ဖြေရေးနေရာတစ်ခုသာမကအရောင်းအ ၀ ယ်၊ ငွေသွင်းခြင်း၊ အလုပ်အတွက်ငွေပေးချေခြင်း၊ အရောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ရန်ပုံငွေများကိုရွှေ့ဖို့ ...
"Beeline" ကိုချေးငွေယူနည်း ဤသည်အော်ပရေတာတစ်ဦးချေးငွေပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သနည်း
မြို့တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ? မြို့တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများများ၏စီးပွားရေးထိရောက်မှု။ Payback ကာလ
Sberbank ကတ်များ: အမျိုးအစားများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ် (ဓါတ်ပုံ)
၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်ဘဏ်ကဒ်များကိုစျေးကွက်သို့မကြာမီကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအားနှစ်သိမ့်မှုပေးသောကြောင့်လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကဒ် ...
ယာဉ်မောင်းသူများစွာသည်အကန့်အသတ်မရှိအာမခံထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ် ၀ င်စားကြသည်။ ဤသည်မှာကားအမျိုးအစားကို၎င်း၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်မှသာမကတတိယပါတီများကထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ မပါဘဲအာမခံ ...
ကမ္ဘာ့မတူကွဲပြားသောနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးငွေကြေးများသည်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ငွေကြေးတစ်ခုစီကိုအထူးသင်္ကေတဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ဤသည်ကသူတို့ကိုမဆိုမှတ်မိစေသည် ...
လူတွေဟာဘယ်နေရာမှာအရေးတကြီးငွေချေးဖို့စဉ်းစားနေကြသလဲ။ ဒီမေးခွန်းကတကယ်အရေးကြီးတယ်။ အမှန်မှာကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအခြေအနေများမှမည်သူမျှမလွတ်ကင်းနိုင်ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်း ... "nth" ပမာဏလိုအပ်လိမ့်မယ်။
ချစ်ကြည်ရေး - အဲဒါဘာလဲ ချစ်ကြည်ရေး၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကအကြံပေးသောကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးသို့ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လောက်မကြာခဏလျှောက်ထားကြပါသလဲ။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အများဆုံးကြော်ငြာထုတ်ကုန်ကိုဝယ်? ထုတ်လုပ်သူတွေအကုန်အကျခံရုံတင်မကဘူး ...
Steam မှငွေထုတ်နည်း ဒဏ္myာရီများကိုဖျက်ဆီးခြင်း
ဒီတော့ဒီနေ့မင်းတို့ Steam ကနေပိုက်ဆံဘယ်လိုထုတ်ယူရမယ်ဆိုတာမင်းတို့နဲ့အတူတွေ့ရမယ်၊ ငါတို့ရဲ့စိတ်ကူးဘယ်လောက်လဲဆိုတာစမ်းကြည့်ဖို့လည်းကြိုးစားမယ်။ အကြောင်းမှာသုံးစွဲသူများစွာသည်ဤပြissueနာကြောင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ဒါ…
နော်ဝေခရိုဏာ - နော်ဝေ၏အဓိကငွေကြေး
ယနေ့နော်ဝေတွင်မည်သည့်ငွေကြေးရှိကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းမေးသောအခါဤနိုင်ငံ၏တည်နေရာကိုချက်ချင်းမှတ်မိသည်။ နော်ဝေသည်ဥရောပ၌ရှိလျှင်ငွေကြေးသည်ယူရိုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီ ...
မသင်မနေရအာမခံဆိုင်ရာဥပဒေသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက OSAGO အာမခံပေါ်လစီအားလက်ခံရရှိရန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤစာရွက်စာတမ်းသက်တမ်းကုန်သွားလျှင်၊ သို့မဟုတ်အိမ်တွင်ထားခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်အာမခံကိုထုတ်ပေးလျှင် ...
Pension Plus သည် Sberbank တွင်ငွေပမာဏဖြစ်သည်။ အခြေအနေများနှင့်အကျိုးစီးပွား
Sberbank သည်ရုရှားနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ဖောက်သည်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီသာမကပျမ်းမျှဝင်ငွေရှိသောသာမာန်ရုရှားလူမျိုးများဖြစ်သည်။ သော်လည်း ...
စိန့်ပီတာစဘတ်ရှိ“ Novaya Okhta” လူနေအိမ်ရာအဆောက်အ ဦး - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်၊ ဖော်ပြချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များ
ယနေ့စိန့်ပီတာစဘတ်၏ဆင်ခြေဖုံးနှင့်ဆင်ခြေဖုံးများကိုတက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည်။ မြို့ပြ၏နေထိုင်သူများသည်အိုးအိမ်လိုအပ်နေသည်။ သို့သော်မြို့၏ဈေးနှုန်းမှာအလွန်မြင့်မားသောကြောင့်ဈေးအမြင့်ဆုံးနေရာ၌ပင်တိုက်ခန်း ၀ ယ်နိုင်သည်။
မိမိနိုင်ငံ၏အိမ်ကိုအိပ်မက်မမက်လိုသူမှာမည်သူမျှဖြစ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုရဖို့နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်းကိုဝယ်နိုင်သည်။ သို့သော်များစွာသောအိပ်မက်များသည် ...
အဆောင်။ ဒါဟာဘာလဲ, ဘယျအရာအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအကျိုးခံစားခွင့်
ဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်း၊ ငွေဖောင်းပွမှု၊ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများရှိလင့်ကစားအိမ်ဝယ်လိုအားသည်အမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျောင်းသားများသည်တက္ကသိုလ်များမှဘွဲ့ရပြီး၊ ဘော်ဒါဆောင်များမှထွက်ခွာကြပြီးအချို့သောအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းများပြုလုပ်နေသည်။
အဘယ်အရာကိုချေးငွေ၏ Non-ငွေပေးချေရန်ခြိမ်းခြောက်? ကချေးငွေမဆပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်, ဒီချဉ်းကပ်မှု၏အကျိုးဆက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ?
လူတစ် ဦး သည်ဘဏ်တစ်ခုမှငွေချေးယူပြီးဖြစ်သည့်အတွက်အခြေအနေများကြောင့်သို့မဟုတ်ငွေမပေးလိုခြင်းကြောင့်လစဉ်အရစ်ကျမလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းမှသတိပေးချက်များ ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 12 Next ကို 's Page
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,974 စက္ကန့်ကျော် Generate ။